Shacabka Hargeysa oo ka hadlay sida ay arkaan xukunkii Boqor Buur-madow Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Shacabka Hargeysa oo ka hadlay sida ay arkaan xukunkii Boqor Buur-madow Qeybaha kala duwan ee bulshada Magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkii Somaliland ay ku riday Boqor Cismaan Aw Maxud Buur-madow.
Iyadoo dhawaan Maxkamada dhexe ee Maamulka Somaliland ay xabsi hal sano ah ku xukuntay Boqor Cismaan Aw Maxud Buur-madow ayaa waxaa arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka magaalada Hargeysa.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada ayaa waxa ay qabaan in xukunkaasi uu ahaa mid sharci daro ah oo aan laga fiirsan, waxaana ay sheegeen in hadii ay sax tahay eedeynta loo jeediyay boqorka loo baahan yahay in latashiyo lala sameeyo Odayaasha iyo Salaadiinta Somaliland.
Qeybo kale oo ka mid ah bulshada ayaa waxa ay qabaan in xukunkaasi uu yahay mid cadaalad ah oo waxa ay ku doodayaan in Buur-madow uu hadalo meel ka dhac ah ka faafiyay Masuuliyiinta iyo Shacabka Somaliland.
Hadal heenta ugu badan ee magaalada Hargeysa oo ay dadka isla dhexmarayaan ayaa waxa ay tahay xukunka Boqor Cismaan.